Waa maxay Sababta ay Musqulaha Dadka Kale marwalba Fiicnaadaan?
Bogga ugu weyn / blog / Musqusha Dadyowga Kale Maxay Markasta Ugu Fiicanyihiin?
2021 / 04 / 12 Qoondayntablog 6692 0
Dad badan ayaa fiiriya guryahooda markay dayactireen kadib, kadibna waxay la barbardhigaan kuwa kale, marwalba waxay dareemaan in dadka kale ay kafiicanyihiin muuqaalkooda, ma falcelintan silsiladda ah ee "carruurta dadka kale"? Maanta waxaan eegi doonaa qurxinta musqusha dadka kale, runti ma ka wanaagsan tahay gurigooda?
1, Ground laamiyaal la mariyey dusiyeen labada geesood, waa qurux. Darbiyadu waa sibidh cad oo isku mid ah, taas oo musqusha ka dhigaysa mid furan oo dhalaalaysa. Sawirada sudhan, saxanka alwaaxda, muraayad aad u fiican, laambadaha gidaarka, iwm, qurxinta oo dhan ayaa musqusha gaar ahaan mid xasiloon ka dhigaysa.
2, Gidaarka leh alwaaxda hadhuudhka alwaaxda ah, saamaynta sidoo kale waa mid shakhsiyadeed, isla markaaba ka dhigaysa booskan midab khafiifka ah leh, wuxuu umuuqdaa mid ka duwan. Ku dheji niche derbiyada, oo ku habboon in la dhigo sahayda maydhashada, iyadoo la badbaadinayo dhul wax ku ool ah oo qurux badan. Lagu qurxiyey nidaamyo ubax ah, oo qaabkoodu ka buuxo.
3, Goobta musqusha waa mid weyn, si kasta oo loo diyaariyo, ficil ahaanta ma xuma. Ku dhaji xoogaa armaajo darbiyada, isla markiiba meel aad wax dhigatid, labada dambiilood ee hoose ee hoose ayaa sidoo kale fiican oh.
4, Foornooyinka alwaaxa, oo lagu daro tiirarka cawlan ee isku dhafka, waxay umuuqdaan kuwo aad u adag.
5, Cawinta cirka ee goobta, dadka kama dhigin inay dareemaan niyad jab, laakiin waxay u muuqdaan kuwo dabeecad leh. Gaar ahaan darbiyada waaskada, qalabka la isticmaalay, dareenka kacsan, oo aad u casri ah oo casri ah. Weelka dharka lagu dhaqo ee aan caadiga ahayn ee ku yaal saxanka saxanka, oo ku xigta qurxinta ubaxa, meel kasta ayaa ku tusi kara qaabka.
6, Darbigu waa midabbo laba midab leh, oo aan niyad jab iyo kelinimo midna lahayn, oo ay ka buuxdo muuqaal, waxaana dhulka lagu xardhay shilal ubax ah, iyaga oo noqonaya meelaha ugu muhiimsan.
7, Dhulku waa dusiyo laba geesle madow ah, dusiyo cad cad darbiyada, midab madow iyo cadaan ah
8, Pink qurux badan iyo saxan qurxoon ayaa indhaha soo jiita. Meel kasta oo ka mid ah musqusha si qurux badan ayaa loo habeeyay, waxay ka dhigi doontaa dhammaan iftiinka!
9, Kaydinta waa wax laga naxo!
12, Darbiyada iyo sagxadda oo leh isla dhoobada, dhadhanka dabiiciga ah, waxay u egyihiin heer sare. Musqusha gidaarka sudhan ee cad iyo saxanka qubeyska oo leh lahjad yar oo cadaan ah oo ku taal meesha cirro leh, waxay umuuqataa xitaa sifiican.
Hore:: Hal Musqul Ayaa Ku Filan, Maxaad Ugu Baahan Tahay Laba Musqulood Dalka Shiinaha? Next: Musqulahaan sidoo kale waa kuwo aad u qiimo badan, Dhammaantood ma aragtay?